Mushure mekutengesa Sevhisi-NINGBO CHEM-PLUS & JW FILM
Yedu Mushure-Yekutengesa Dhipatimendi ichakubatsira iwe kana iwe uine chero mibvunzo kana matambudziko.
Warranty inovhara: kupera, kupwanya, blistering uye delamination. Iyi waranti haifukidze kusakara kwechigadzirwa, kubvarura kwekunze, tsaona, kurovera kana chero chimiro chekukuvara kwemaune kunokonzerwa nemauto ekunze.
KPAL Paint Dziviriro Firimu inofanirwa kuiswa mudura rine mweya. Tembiricha yemukamuri inofanirwa kunge iri pakati pe20 ℃ uye 28 ℃, uye hunyoro hunofanira kunge huri 50-70%.
Chenjedzo pakushandisa pendi yekuchengetedza firimu:
1. Dzivisa kugeza mota mukati mevhiki imwe mushure mekuisa iyo firimu kuti uve nechokwadi chekunamatira kwakanyanya pakati peglue nependi;
2. Paunenge uchichenesa mota, dzivisa kushandisa yakasimba-pfuti yemvura kugeza kumucheto kweiyo membrane;
3. Paunenge uchichenesa mota, dzivisa kushandisa mabrashi nemakemikari anoparadza;
4. Dzivisa zvinhu zvakaoma kukwenya uye kukwesha pamusoro peiyo firimu zvakaoma. Zvisaririra zvekukwesha uye kusvuura zvinokanganisa iko kuzere kweiyo firimu
5. Zvinokurudzirwa kuita zvechinyakare zvekutarisira pane iyo membrane pevhu mwedzi miviri;
6. Hazvikurudzirwi kupurisha pamusoro pefirimu pamusoro;
7. Iko kusimba kwe ultraviolet radiation muzuva rezhizha kwakasimba kwazvo. Usamise mota yako kunze kwenguva yakareba uye uifumure kune zuva;
8. Usamise mota yako pasi pemuti, zvikasadaro pachave yakawanda yeguano shellac glue inonamatira kune iyo membrane pevhu, iyo inoparadza zvakanyanya uye nyore kukuvadza iyo membrane pamusoro pekuputira;
9. Usamisa mota yako pasi peiyo fan fan yeiyo renji hood kwenguva yakareba, zvikasadaro kuchave nemafuta mazhinji emafuta pane iyo membrane pamusoro, izvo zvisiri nyore kuchenesa;
10. Usamise mota yako kwenguva yakareba panzvimbo inodonha panotonhodza mhepo. Iyo inokanganisa mweya-kutonhodza mvura inokuvadza chimiro chemufirimu pamusoro pekuputira;
11. Usamise mota kunaya kwenguva yakareba, asidhi iri kunaya inokanganisa membrane pamusoro;
12. Kana ukashandiswa semotokari yemuchato, usanamatira mukombe wekuyamwa wakanangana nepamusoro peiyo membrane; micheka yemota yemuchato, firecrackers uye fireworks zvinogona kukonzera kusviba pane iyo membrane pamusoro, uye inoda kucheneswa nekuchengetwa mukati maawa gumi nemaviri;
Kana zvichidikanwa, timu yeKPAL ichashanda pamwe newe mukati menguva pfupi kwazvo yekugadzirisa nyaya dzako.
Ndapota tipei ruzivo runotevera kwatiri:
· Mufananidzo weiyo firimu serial nhamba, iyo inowanzo kuiswa mukati meiyo chubhu musimboti, uye kutizivisa isu yakatengwa modhi
· Mavhidhiyo kana mifananidzo inoratidza rezinesi ndiro nhamba uye matambudziko nefirimu pamotokari
· Mota modhi uye gore